Counter-Strike 1.6 fitaovam-piadiana ► Counter Strike 1.6 Download
Febroary 28, 2022	Off	By roma
Counter-Strike 1.6 dia iray amin'ireo lalao tifitra olona voalohany malaza indrindra tamin'ny fiandohan'ny taona 2000, ary mbola nilalao hatramin'izao noho ny fitsipika tsotra sy ny hafainganam-pandehany. Rehefa milalao ianao Counter Strike 1.6, tianao ho fantatra hoe inona no fitaovam-piadiana azonao ampiasaina, ary iza amin'ireo no tena mahasoa anao.
Karazana fitaovam-piadiana in Counter Strike 1.6
Fitaovam-piadiana in Counter-Strike 1.6 dia mizara ho sokajy telo: basy (anisan'izany ny basy submachine), fitaovam-piadiana mahery vaika ary poleta. Ny basy tsirairay dia manana ny mampiavaka azy manokana, ao anatin'izany ny tahan'ny fahasimbana, ny fahamarinany, ny halavirana, ny taham-afo, sns., ka misafidy ny tsara indrindra. fitaovam-piadiana in Counter-Strike 1.6 satria ny fomba filalaovanao dia tena ilaina amin'ny fahombiazana.
Ny fitaovam-piadiana mora indrindra amin'ny Counter-Strike 1.6
Pistols no mora indrindra fitaovam-piadiana in Counter-Strike 1.6, fa izy ireo koa no malemy indrindra. Mety hiteraka fahasimbana be ny Pistols raha tsara ny tanjona, saingy maharitra kokoa ny famerenana azy ireo noho ny fitaovam-piadiana hafa. Tena ilaina izy ireo rehefa manana vola kely (latsaky ny $300) ny mpilalao iray ary lany ny bala ho an'ny fitaovam-piadiany voalohany. Ny mora indrindra dia ny P228 ($200), ary io ihany koa no hany pistol afaka maka silencer (ho an'ny $250 fanampiny). Ny Glock dia marina, mora ampiasaina amin'ny tanana iray, ary manana taham-pandrefesana avo be — saingy ambany ny fahasimbany isaky ny tifitra ary tsy dia misy fomba tifitra maro azo ampiasaina. Ny USP 45 dia marina mitovy amin'ny an'ny Glock fa miteraka fahasimbana bebe kokoa isaky ny fihodinana.
Fitaovam-piadiana lafo kokoa sy mahomby in Counter Strike 1.6
Lafo kokoa ny basy sy basim-borona fitaovam-piadiana in Counter-Strike 1.6 noho ny basy poleta sy submachine, saingy ny tombony azony dia mahatonga azy ireo ho mendrika ny vidiny ho an'ny mpilalao maro. Ny basy dia tena marina amin'ny halavirana lavitra ary manimba kely; tsy haingana toy ny SMG na basim-borona anefa izy ireo. Ny basim-borona dia mandaitra indrindra amin'ny ady akaiky, saingy matetika izy ireo no maka tifitra maromaro hamonoana mpifanandrina. Ny basy sub-machine (SMGs) no mora vidy indrindra manaraka ary mitondra hery mahery vaika kokoa noho ny pistol. Maro amin'ireo mpilalao no aleony mampiasa SMG noho ny basy feno basy noho ny tombony lanja.
Ny fitaovam-piadiana lehibe indrindra amin'ny Counter-Strike 1.6
Miaraka amin'ny grenady tokana, azonao atao ny mamono fahavalo marobe indray mandeha na ekipa iray manontolo, arakaraka ny tanjonao tsara. Mamono avy hatrany ny antsy fitaovam-piadiana in Counter-Strike 1.6 izay azonao ampiasaina rehefa mirohotra mankany amin'ny toeram-pialan'ny fahavalo ianao na rehefa ao anatin'ny toe-javatra 1v1 amin'ny mpilalao hafa. Ireo roa ireo dia fitaovam-piadiana tena ilaina amin'ny fahombiazanao Counter Strike 1.6 ary ny fahaizana mampiasa azy ireo dia hahatonga na hanimba ny traikefanao amin'ny lalao.
Ny fitaovam-piadiana tsara indrindra amin'ny Counter-Strike 1.6
Mazava ho azy, raha ny tena milalao sy mifidy fitaovam-piadiana in Counter-Strike 1.6, ny fahaizanao sy ny paikadinao no tena hanapa-kevitra raha handresy ianao na tsia. Fa na dia mahay milalao aza ianao Counter-Strike 1.6, ny fahafantarana hoe fitaovam-piadiana miasa tsara indrindra amin'ny toe-javatra sasany dia mety hanome anao lela.
rehetra Counter-Strike 1.6 lisitry ny fitaovam-piadiana:
Basy pistols (basy pistols): Price
Tactical USP 500 $
Voromahery 650 $
FN Five-XNUMXN 750 $
Dual 96G Elite Berettas 800 $
MP5 navy 1500 $
A P 1700 $
M3 super90 1700 $
MKA1 carbine 3100 $
Ampahany SG-552 3500 $
Aug 3500 $
Scout 2750 $
Ampahany SG-550 4200 $
AWP Arctic Warfare police (A1 awp 7,62) basy sniper 4750 $
Flashbang grenady 200 $
grenady setroka 300 $
grenady avo lenta 300 $
FIADY HAFA CS 1.6
Kevlar: 650 $
Antsy: Maimaimpoana ho an'ny rehetra counter-strike 1.6 mpilalao
Nightvision 1250 $
Kit defuse baomba 200 $
Tagsfitaovam-piadiana tsara indrindra counter strike 1.6 counter strike 1.6 Download counter strike lisitry ny fitaovam-piadiana Counter-Strike 1.6 fitaovam-piadiana cs 1.6 fitaovam-piadiana tsara indrindra cs 1.6 Download cs 1.6 fitaovam-piadiana cs 1.6 karazana fitaovam-piadiana lisitry ny fitaovam-piadiana cs karazana fitaovam-piadiana counter strike 1.6
Counter-Strike 1.6: fomba ialana amin'ny fisolokiana
Counter-Strike 1.6: ny fomba hanakanana ny C4